Uthintelo lobhubhane kunye nokuqala kwakhona kwemveliso-Iindaba zeNkampani-IBURLEY
Uthintelo lobhubhane kunye nokuqala kwakhona kwemveliso
kwizimvo:141 Umbhali: uMhleli weSiza Shicilela ixesha: 2020-02-05 Imvelaphi: Indawo
Ukuphendula kubhubhane, inkampani yamkele uthotho lwamanyathelo okuqinisekisa ukuthintela kunye nokulawula kunye nokuqalisa kwakhona kwemveliso. Ukusukela oko uqalile ukusebenza ngoFebruwari 17, inkampani iphumeze ngokungqongqo inkqubo yokuthintela ubhubhane kunye nenkqubo yolawulo. Ukongeza ukubulala iintsholongwane kumzi-mveliso kunye nokuvavanywa kobushushu, ikwathumele abasebenzi abakhethekileyo ukuba babhalise kwisango lasefektri, kwaye benze uvavanyo lobushushu kunye nokubulala iintsholongwane ezandleni nasezinyaweni zabasebenzi abangena nabaphumayo ukuqinisekisa ukuthintela ubhubhane kunye nolawulo.
UBurley ukwaququzelele ukuqala kwakhona komsebenzi ngokungqinelana neemfuno zikarhulumente, waqhagamshelana nabasebenzi, kwaye waphatha onke amakhadi okupasa kubasebenzi ukubanceda babuyele enkampanini ngokutyibilikayo. Kwangelo xesha, abasebenzi benkampani bahlawulwa ngokungqinelana nenkqubo yenkampani nokuba bayasebenza okanye bodwa. Abasebenzi abasemsebenzini banikwe igumbi lokuhlala kunye nebhodi yasimahla yenyanga enye, kwaye batshintshiwe ukusuka kwirayisi yantlandlolo kunye nokutya ukuya kwibhokisi, eya kuqokelelwa zizo zonke iindibano zocweyo namasebe.
Okwangoku, inani labasebenzi ababuyela kwinkampani lifikelele kwi-60%, kwaye uninzi lweendibano zocweyo zemveliso ziphinde zaqala kwimveliso. Imveliso yenkampani ikakhulu isekwe kwiodolo ezibekwe ngaphambi kokukhawuleza, kwaye kuqikelelwa ukuba amandla emveliso angaphambili aya kubuyiselwa ngoFebruwari 25. Ngexesha elizayo, inkampani yethu iya kuququzelela imveliso ngelixa iqinisekisa ukhuseleko kwaye yenze igalelo elingakumbi kuphuhliso lwentlalo.